Vocational Chikoro chiri Kuuya Kwemukati Dzimba | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara16 BursaVocational Chikoro Chinouya Kune Dzemukati Cars
05 / 01 / 2020 16 Bursa, GENERAL, HIGHWAY, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, Automotive, TURKEY
kuuya kuchikoro chebasa remota dzemudzimba
Vocational uye technical Anatolian High Chikoro Araç Magetsi Mota Bazi Alan anovhura kekutanga mumunda weMota Vehicles Technology. Bursa Automotive Industry Exporters Association Vocational uye Technical Anatolian High School gore rinouya kudzidzisa kunotanga.
Turkey vanovhura kwayo wechipfuwo motokari yokutanga nyika. Panguva iyo gadziriro yefekitori muBursa ichienderera, Ministry of National Education yakatora danho kudzidzisa vashandi vanokwanisa kuti vashandiswe mukugadzira mota yemagetsi izere.
Muchirongwa ichi, icho chinozowonekwa nekugadzirwa kwemukati nekuenyika, iyo “Electric Vehicles Branch” ichavhurwa kekutanga mumunda weMota Vehicles Technology muVocational uye technical Anatolian High Chikoro cheMotokari Motorese Exporters Association muBursa, uko fekitori ichavhurwa kudzidzisa vashandi vehunyanzvi vanodiwa. Kudzidziswa kwevadzidzisi kunozoitwa zvinoenderana nekharikhulamu ichavambwa munguva pfupi uye vadzidzi vanozobvumidzwa kuenda mundima iyi mune inotevera gore rekudzidza pamwe nekuongororwa mukati mechikamu cheiyo High School Transition System (LGS).
Bursa Automotive Industry Exporters Association Vocational uye technical Hybrid mota, mota dzemagetsi, hydrogen powered mota, tekinoroji yebhatiri, magetsi emagetsi, sensors, mifananidzo yekugadzirisa, kutungamira tekinoroji, CCTV (Yakavharwa Dunhu Camera Systems) michina masystem, , kubhadharisa zviteshi tekinoroji, electrolysis technologies.
Gurukota rezvedzidzo yenyika, Ziya Selçuk, akapa nhau dzakanaka dzehunyanzvi hwekutsigira vashandi vemotokari yemuno, akati, "Isu tinogoverana kufara kwevadzidzi vedu, vadzidzisi uye neruzhinji rwese." Turkey ichabereka motokari kuti akatanga Kurovedza unyanzvi basa kushanda expeditiously kuzivisa Selcuk Minister mberi:
Olarak SeShumiro, isu tinofunga nezve izvo zvinodiwa nenyika yedu apo ichidzokorora kudzidzira mabasa uye hunyanzvi. Mune mamiriro ezvinhu aya, takabudirira kuita zvirongwa zvitsva zvakawanda mugore rekupedzisira.
Semuenzaniso, isu takagadzira ASELSAN Vocational uye technical Anatolian High Chikoro chine vimbiso yekushandira mu Ankara kuzosangana nezvinodiwa zvevashandi vehunyanzvi vanodiwa mumunda weindasitiri yekudzivirira uye isu takagamuchira vadzidzi kubva ku1% yezvekuita basa rehunyanzvi nehunyanzvi kwekutanga. Saizvozvo, isu takatanga kupa basa-rakavimbiswa basa rekudzidzisa mumunda weMicromechanics iyo inoshandiswa muminda yakawanda senge mota, indasitiri, biotechnology, aerospace uye chikamu chekutarisa uye inoita hwaro hwetekinoroji hwepamberi pekutanga mumakore zana nemakumi mashanu Bursa Tophane Vocational uye technical Anatolian High Chikoro.
MuKırıkkale, tiri kuvaka kambani nyowani yekudzidzira uye yepamusoro yeAnatolian chikoro chekudzivirira neMechining and Chemical Industry Institution (MKEK). Isu tinozovhura bazi remagetsi emoto muMota Vehicles Technology Area kekutanga kuitira kuti tidzidzise vashandi vehunyanzvi izvo zvichadikanwa muBursa umo chirongwa chemotokari chemukati chichagadzirwa. Nechinangwa ichi, takasarudza Bursa Vocational High Chikoro cheMota yeVatengi veVashandi veVashambadziri kunze kwenyika.
Pasi pekubatana kweMutevedzeri weGurukota, Mahmut Özer, General Directorate yeVocational uye Technical Education yakatanga mabasa ayo. Tichatora vadzidzi vedu vekutanga mundima iyi segore rinotevera rekudzidza. "
Bursa Tophane Vocational uye technical Anatolian High School
motokari dzisina kushandiswa
hydrogen powered mota
Motokari Motokari Technology